बौद्ध कथाहरूमा रामको चर्चा « Janata Samachar
बौद्ध कथाहरूमा रामको चर्चा
थेरवादी बौद्धहरूको रामकथा हेर्ने हो भने ती कथामा दशरथ दशवटा रथवाला होइन, दश प्रकारका व्यसनको बानी परेको व्यक्ति छ ।
त्यसै कारण उसले आफ्नी प्रिय पत्नीसँग डराएर रामलाई वनमा पठायो । रामले पिताको वचन पालना गरे । बाह« वर्षपछि राम, लक्ष्मण र सीता अयोध्या फर्केर आए । अनि जब भरतले रामलाई राज्य सञ्चालनको लागि प्रार्थना गरे तर रामले त्यो कुरा स्वीकार गरेनन् । अन्तमा कैयौं मान्छेले आग्रह गरेपछि र भरतले थप अनुनय गरेपछि बल्ल राज्याभिषिक्त भए । अर्को एउटा रामकथा अनुसार ‘दशरथ बृद्ध थियो र जवान पत्नी कैकेयीको दास थियो । तैपनि उसलाई रामप्रति अपार माया थियो ।
त्यसैले उसलाई शंका थियो, कैकेयीबाट रामलाई खतरा पुग्न सक्छ । अतः उसले एक दिन एकजना ज्योतिषीलाई बोलाएर सोध्यो–‘भन म कति वर्ष वाँच्छु ?’ ज्योतिषीले हिसाब गरेर, कुण्डली लेखेर, ताराबल र चन्द्रबल बिचार गरेर दावीका साथ भन्यो–‘बाह« वर्ष बाँच्नुहुन्छ ।’
त्यसपछि दशरथले आफ्नो अधीनतामा रहने जंगली कबिलाहरू कहाँ रामलाई रहने–बस्ने प्रबन्ध ग¥यो र के भनेर जंगलमा पठायो भने–‘हे राम, यहाँ रहँदा तिमीलाई कुनै खतरा हुनसक्छ, अतः बाह« वर्षको लागि तिमी जंगली मान्छेहरू कहाँ रहेर फिर्ता आऊ ।
त्यतिखेरसम्ममा म मर्नेछु र यो राज्य तिमीले पाउनेछौ’ तर दशरथ तुरुन्तै म¥यो । तैपनि राम फिर्ता आएनन् । भरतले अनुनय–विनय गर्दा पनि आएनन्, बाह्र वर्ष पूरा भएपछि मात्र उनी फिर्ता भए ।’
यस्ता कथा मात्र होइन । थप, प्रारम्भमा रामकथा केवल वनवाससम्म सीमित थियो भन्ने पनि पर्याप्त प्रमाण पाइए । श्री एस्. वी. रामले घोषणा गरेका छन्– ‘चार हजार वर्ष पहिले बनेको राम–कथाको विषयमा ऐतिहासिक आधारहरू पाउनु निकै मुस्किलको काम हो ।
तैपनि राष्ट्रिय हितको लागि यसको समग्र अनुशीलन हुनु आवश्यक छ ।
पाण्डवहरूसँग सम्बन्धित कथाहरू त एउटै प्रकारका छन् तर रामकथा एकै प्रकारका छैनन् । त्यति मात्र होइन, रामकथा पूर्र्वी प्रदेशतिर लेखिनुभन्दा पहिले नै पश्चिम एशियामा खास गरी इरानमा रचना गरियो । तैपनि यी सब कथाहरूमा भारतमा रचित रामकथा सबभन्दा महान् छ ।’
त्यसो नभएर यदि रामायण महाकाव्य त्रेतायुगबाटै अर्थात् नौ लाख वर्ष पहिले नै वाल्मीकि महर्षिले लेखेको भए यो कुरा पाण्निि र पतञ्जलिलाई थाहा हुन्थेन ? यदि उनीहरूलाई यो कुरा थाहा थियो भने उनीहरूले रामको नाम किन लिएनन् ? सोभियत संघको सिरदर्या नदी र आमुदर्या नदीहरूका तटमा रहने डान र नीपर नदीहरूका तटमा फैलिएका आर्यहरूलाई अथवा जर्मनीमा रहने आर्यहरूलाई अहिलेसम्म रामायणको नाम पनि थाहा नहुने कारण के हो ?
यो कुरा साँचो हो, जुन रामकथा स्वयं वाल्मीकिले सुने र त्यसैलाई महाकाव्यको रूप दिए । त्यसैले उपर्युक्त प्रश्नहरूको उत्तर पाइएको छैन । चाहे कसैले कति नै घुमाई–फिराई वताओस् । चाहे कति नै नभएका कल्पना जोडोस् । तैपनि ‘यो रामायण महाख्यान इक्ष्वाकु राजबंशमा उत्पन्न कथाको रूपमा विख्यात छ’ भनेर स्वयं वाल्मीकिले भनेको कुरा कसैले
इन्कार गर्न सक्दैन ।
आर्य, दानव, राक्षस आदि गण र जातिहरूका बीचमा जुन झगडा भए, तिनैलाई ध्यानमा राखेर वाल्मीकि महर्षिले राम–रावण–युद्धको वर्णन गरे । रामायणमा वानरहरूको एउटा विशेष स्थान छ । श्रीरामसँग सम्झौता गरेर आफ्ना भाइ बालिलाई जुन सुग्रीवले मा¥यो, उसैको नेतृत्वमा सारा वानरहरू श्रीरामका सहयोगी बनेर खडा भए । वानरहरूले युद्ध गर्नु, आफ्नो पुच्छरले बेरेर पहाड उखेलेर शत्रुहरूमाथि फ्याँक्नु, समुद्र नाघ्नुजस्ता कल्पनाहरू विश्वास गर्न लायक लाग्दैनन् ।
तैपनि वानरहरू रामका सहारा बन्नु र विभीषणले आफ्नो दाजुसँग विद्रोह गरेर स्वार्थ पूरा गर्दै रामको पक्षमा पुग्नुले तत्कालीन परिस्थिति प्रकट गर्दछन् । यसले आर्य र आर्येतर जातिका बीचमा जुन संघर्ष भएका थिए, तिनीहरूमध्ये केही आर्येतरहरूले आफ्नै पक्षको विरुद्धमा विद्रोह गरेर आर्यहरूसँग हात
यदि यस्ता अनेक विभीषणहरू आर्यहरूका पक्षमा नमिलेको भए दानव, राक्षस जातिहरूलाई जितेर सिन्धुसभ्यताको केन्द्र बनेका प्रान्तहरू आफ्नो हातमा पार्न आर्यहरूलाई सम्भव हुन्नथ्यो ।
टाेखामा सपनतिर्थ मेला (फोटोफिचर)
काठमाडौं । नयाँ वर्षको शुरुवातसँगै पौराणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक एवं प्राचीन नगरी टोखामा बिस्का नखः(बिस्का
कोरोनाविरूद्धकाे खोप लगाउन सर्वसाधारणकाे भीड (फोटोफिचर)
देशमा कोरोना भाइरस संक्रमण पुन: बढ्न थालेसँगै देशभर सर्वसाधारणका लागि आजबाट कोरोनाविरुद्धको खोप अभियान शुरु
टुंडिखेलमा घाेडेजात्राकाे राैनक (फाेटाेफिचर)
प्रत्येक वर्ष चैत्र कृष्ण औँसीका दिन टुँडिखेलमा घोडेजात्रा मनाइँने परम्परा छ ।
भक्तपुरको प्रसिद्ध बिस्केट जात्रा (फोटोफिचर)
आज दिउँसो ४ बजे टौमढीस्थित ङातापोल (पाँचतल्ले मन्दिर) अगाडिबाट भैल खः (भैरवनाथको रथ) तानातान गर्दै
घर जग्गाको नक्सा घरबाटै, शुल्क बुझाउन मालपोत जानै नपर्ने